ဘဝမှတ်တိုင်: ✔Myanmar Font for Galaxy S4 (No Need To Root)✔
✔Myanmar Font for Galaxy S4 (No Need To Root)✔
Samsung Galaxy S4 ကိုRooting မလုပ်ပဲ မြန်မာလိုမြင်ရပြီးအသုံးပြုနိူင်အောင်လုပ်နည်းလေးပါ။တခုတော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။Facebook Wall,Timeline and Notification ,Tango and Viber စတာ တွေမှာမြင်ရနိူင်ပြီးတော့ Browser တွေမှာတော့ မြန်မာလိုမမြင်ရသေးပါဘူးခင်ဗျ။
website ​တွေမှာပါ မြန်​မာစာအမှန်​မြင်​ရချင်​ရင်​
​တော့ mandalay browser apk ကိုအသုံးပြု
အဆင့် (၁) Zawgyi-One Flipfont ကို install လုပ်လိုက်ပါ.
အဆင့် (၂) iFont ကို install လုပ်လိုက်ပါ.
အဆင့် (၃) Frozen Keyboard Pro ကိုလဲ install လုပ်လိုက်ပါ.
Setting> My device > display> font style မှာ အောက်ဆုံးက samsung sans ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးပါ ။
S4- i 9505 မှာအပေါ်ကမြန်မာဖောင့်Flipfont ထဲမှာပါဝင်တဲ့-(Myanmar+ xxxx?) Font style ၈မျိုးကိုinstall လုပ်မရပါဘူးး..
Setting–>>My device–>> Language and input–>>Frozen keyboard Pro ကိုအမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ပြီး Default keyboard—>>Frozen Keyboard Pro ကိုရွေးပေးထားပါ။
Ifont ကိုဖွင့်ပါ အပေါ်အတန်းမှာ install ဆိုတာရှိပါတယ် နှိပ်လိုက်ပါ။
မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ-Myanmar font Style,E.g-(Myanmar+iphone) ကိုရွေးပါ။
Install လုပ်လိုက်ပါ set ဆိုတာကိုဆက်နှိပ်ပါ
Ok ထပ်နှိပ်လိုက်ပီး restart လုပ်ခိုင်းရင် power ကိုခဏဖိလိုက်ပါ အထဲက Restart ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါ
power ပြန်တက်လာတဲ့အခါ facebook , Tango and Viber စာရိုက်ကြည့်လိုက်ပါ မြန်မာလိုမြင်ရပါပြီခင်ဗျား။
Setting> My device > display> font style မှာ Flipfont ထဲမှာပါဝင်တဲ့ (Myanmar+ xxx?) ၈ မျိုးထဲကမိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ
Font Style ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။
မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ-Myanmar font Style, E.g-(Myanmar+iphone) ကိုရွေးပါ။
power ပြန်တက်လာတဲ့အခါ facebook ,Tango and Viber စာရိုက်ကြည့်လိုက်ပါမြန်မာလိုမြင်ရပါပြီခင်ဗျား။
★ifont apk v3.0.2 အား​ဒေါင်းရန်​★
★Frozen keyboard pro v0.5.3 အား​ဒေါင်းရန်​★
★Zawgyi One Flip Font(new)အား​ဒေါင်းရန်​★
★Mandalay Browser v1.2 အား​ဒေါင်းရန်​★
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 4/12/2014 09:27:00 am